Suvekshya Thapa -- Tattoo on breast
Topic: Suvekshya Thapa -- Tattoo on breast
Author Topic: Suvekshya Thapa -- Tattoo on breast (Read 17092 times)
« on: July 14, 2015, 05:28:30 AM »
Re: Suvekshya Thapa -- Tattoo on breast
« Reply #1 on: July 14, 2015, 09:45:28 PM »
I love Nepal Tattoo on her tits...
« Reply #2 on: July 16, 2015, 03:09:38 PM »
Bindaas maa khelna Tattoo hunai parne ho ??
« Reply #3 on: September 26, 2015, 04:50:48 PM »
Tits ma tattoo mandatory bha ho nepali actress haru lai? hah
« Reply #4 on: October 23, 2015, 10:31:37 PM »
‘बेस्करी दुखेपछि आँखा चिम्लिएँ’
शुक्रबार, श्रावण १५, २०७२
२०४८ सालतिर मञ्चन भएको नाटक ‘सिर्जना’मा बालकलाकारको भूमिका अभिनय गरी कलाक्षेत्रमा लागेकी शुभेक्षा थापा अहिले ग्ल्यामरस नायिकाका रूपमा परिचित छिन्। होम प्रोडक्सन कम्पनी शुभेक्षा इन्टरटेनमेन्ट प्रालिमार्फत 'को हुँ म', 'द मिस नेपाल', 'टाइगर द रियल हिरो', 'मखमली', 'बिन्दास ३' जस्ता चलचित्र निर्माण गरेकी उनी आफ्नो ग्ल्यामरस छविप्रति गौरव गर्छिन्।
'राम्रो देखिनु नै ग्ल्यामर हो। जे गर्दा राम्रो देखिन्छ त्यही गर्ने हो। समय अनुसार गेटअप परिवर्तन हुनसक्छ', ग्ल्यामरस बन्‍नुको राज खोल्दै उनी भन्छिन्, ‘राम्रो फिगरले सबैलाई आकर्षित गर्छ तर त्यस्तो फिगर बनाउन सजिलो छैन। खाउँ लाग्दालाग्दै छाड्नुपर्छ। अल्छी नगरी व्यायाम गर्नुपर्छ। म नियमित पौडी खेल्छु। नृत्य पनि गर्छु।'
राम्रो फिगरका कारण खुला पहिरनले आफूलाई सुहाउने उनको तर्क छ। खुला पहिरनमा उनले गराएका कतिपय फोटोसुबाबाट ताली र गाली दुवै पाएकी छन्। त्यस्तो पहिरनमा फोटोसुट वा हट सिन छायांकन गर्नु छ भने परिवार खासगरी श्रीमान्‌लाई अगाडि नै जानकारी दिने गरेकी छन्।
'ग्ल्यामर क्षेत्रको मान्छे के गर्दा राम्रो हुन्छ आफैं सोचेर गर्नु भन्नुहुन्छ', उनी भन्छिन्, ‘एउटा माछाले वक्षस्थल छोपेर पनि फोटोसुट गरेँ। नयाँ काम भएकाले कतिले गाली गरे कतिले ताली।'
शारीरिक सन्तुलनका कारण उनलाई स्विमिङ कस्टुम लगाएर पौडी पोखरीमा पुग्दा रमाइलो लाग्छ। तर केटा र केटी एउटै पोखरीमा पौडी खेल्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो महसुस पनि हुन्छ। 'स्विमिङ कस्टुम लगाएर पौडी पोखरीमा पुग्दा मलाई शरीरको आकर्षण खुलेजस्तो अनुभूति हुन्छ', उनी प्रस्ट्याउँछिन्।
१६ वर्षको उमेरमा प्रेमविवाह गरेकी शुभेक्षाले भर्खरै दाहिने वक्षस्थलमाथि नेपालको झन्डाको टाटु खोपाएर चर्चा पाएकी छन् । ‘अन्य अंगमा पनि टाटु बनाउन सकिन्थ्यो तर नेपालको झन्डा बनाएपछि छातीमै बनाऊँ भन्ने लाग्यो।
देशको माया पनि झल्किन्छ', टाटु खोपाउँदाको अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, 'टाटु खोप्न दुई घन्टाजति लाग्यो। सुरु गर्दा त केहीजस्तो लागेन तर निकै दुख्दो रहेछ। फेरि संवेदनशील अंग अनि टाटु मास्टर केटा। दुखाइ सहन आँखा चिम्लेर बसेँ।'
२०६२ सालमा रिलिज भएको चलचित्र 'ध्रुवतारा'बाट ठूलो पर्दामा डेब्यु गरेकी उनले 'अग्निज्वाला', 'क्रोध', 'प्रहार', ‘बोक्सी'का साथै आफ्नो कम्पनीबाट बनेका सबै चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन्। लगभग चार दर्जन म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी निर्मात्री तथा नायिका शुभेक्षा थापा अहिले चलचित्र ‘मिस नेपाल २' को तयारीमा छिन्।
« Reply #5 on: November 23, 2015, 12:49:38 PM »
शुभेच्छा थापा, नायिका/निर्मात्री
आफ्नै लगानीमा आफैं किन नायिका बन्नुभएको?
आफ्नो लगानीमा आफैं नायिका हुने म पहिलो होइन। फेरि चलचित्रको कथा नै त्यस्तो छ कि म आफैं नायिका बन्नुपर्ने भयो।
चलचित्रकी अर्की नायिका क्षितिजा शाक्यसँग त विवाद नै गर्नुभयो नि?
उहाँसँग अनुबन्ध हुँदा नै सबै कुरा क्लियर भएको थियो। यो वर्ष मेरा लागि त्यत्ति उत्तम छ जस्तो लागि रहेको छैन। जे काम गरे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र पाइरहेकी छु। शनिको दशा पो लागेको छ कि?
फेरि न्युड फोटोको विवाद पनि त तात्तातो छ नि?
त्यही त, त्यो फोटोलाई सबैले नग्न फोटो भन्छन्। वास्तवमा फोटोमा कहाँ छ नग्नता? लुकाउनु पर्ने अंग सबै लुकेकै छन्। देखिएकै के छ र?
नग्न नभए त्यो फोटो कुन वर्गमा पर्छ त?
यस्तो तस्बिर खिचाउने चलन हलिउड/बलिउडमा पुरानो भैसकेको छ। यो तस्बिरलाई नग्नताभन्दा पनि ग्ल्यामरस भन्नुपर्छ।
१४ वर्षीया छोरीकी आमालाई त्यसो गर्दा सुहायो त?
त्यही त म बुझाउन खोज्दैछु। यहाँ नायिकाहरू अलिक पुराना भए कि वास्तै नगर्ने चलन छ। मैले थर्टी प्लस र छोरीकी आमा भएर पनि यत्तिको 'बोल्डनेस' छ भनेर देखाउन खोजेकी हुँ।
अनि त्यो झोंकमा माछाले छाती छोपेर तस्बिर खिचाउनै पथ्र्यो त?
त्यो त मानिसहरूको ध्यान अलिक मप्रति र धेरै मेरो चलचित्र 'मिस नेपाल' प्रति तानियोस् भनेर पनि खिचाएकी हुँ।
त्यो कन्सेप्ट त भारतीय मोडल शार्लिन चोपडाको एउटा तस्बिरको कन्सेप्टसँग मेल खायो नि?
कपी नै गरेको हो, हामी पनि उनीहरूभन्दा के कम छौं र? मेरो बुझाइमा केही कुरा मनपरे त्यसको नक्कल गर्दा फरक पर्दैन।
त्यो तस्बिरले घरपरिवारमा त खलबली नै मच्चिएको होला?
मेरो घरपरिवारले पारिवार र पेसा फरक कुरा हुन् भन्ने कुरा बुझेको छ। ग्ल्यामर क्षेत्रमा संलग्न हुनु मेरो चाहना हो, तर यो क्षेत्रमा लाग्दैमा मैले आफ्नो घरेलु संस्कारचाहिँ बिर्सिएकी छैन।
तपाईंको चलचित्र 'मिस नेपाल’मा पनि तस्बिरमा देखिएजस्तो दृश्य छ?
ठ्याक्कै त्यस्तै दृश्य त छैन, तर केही 'बोल्ड एन्ड ग्ल्यामरस' दृश्यचाहिँ छन्।
मिस नेपालको आयोजक हिडन ट्रेजरले पनि शीर्षक परिवर्तन गर्ने दबाब दिएको छ होइन?
दबाब त होइन, आपत्ति जनाएको जानकारी पाएकी छु। उहाँहरूले उक्त शीर्षकमा इभेन्ट गर्नुहुन्छ। मैले त्यही शीर्षकमा चलचित्र बनाएकी हुँ। चलचित्र भित्र कुनै मिस नेपाललाई दाग लगाउने किसिमको दृश्य वा संवाद छैन।
तपाईंको उमेर र अन्दाज हेर्दा त चलचित्रको शीर्षक 'मिस नेपाल’ होइन, 'मिसेज नेपाल’ हुनुपर्ने होइन?
त्यो त चलचित्र हेरेपछि थाहा पाइहाल्नु हुनेछ। मैले चलचित्रमा आफ्नो उमेर अनुरूपकै चरित्र निर्वाह गरेकी छु।
कुन नायकसँग पर्दामा रोमान्स गर्दै उसको अँगालोमा बाँधिने मन छ?
सेक्सी लाग्ने तीनजना नायक?
राजेश हमाल, आर्यन सिग्देल र जीवन लुइँटेल
मन नपर्ने कलाकार?
सेक्स मीठो कि चुम्बन?
प्रकाशित: माघ ३, २०७०
« Reply #6 on: January 08, 2016, 08:44:16 AM »
« Reply #7 on: June 21, 2016, 10:38:56 PM »
Miss nepal poster
miss-nepal-poster-topless1.jpg (61.95 kB, 604x427 - viewed 384 times.)
« Reply #8 on: January 19, 2017, 02:47:08 PM »
I don't like tattos
« Reply #9 on: November 07, 2017, 07:43:48 PM »